नेपाल आज | क्यान्सर पीडित मेरीबास्सैकी ‘अप्सरा भन्छिन्, ‘सबैभन्दा राम्री नै निरुता’ (भिडियोसहित)
बिहिबार, ०२ साउन २०७६
कभर स्टोरी भिडियो मनोरञ्जन
क्यान्सर पीडित मेरीबास्सैकी ‘अप्सरा भन्छिन्, ‘सबैभन्दा राम्री नै निरुता’ (भिडियोसहित)
सोमबार, २३ पुष २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । लक्ष्मी श्रेष्ठ एकदिन बालुवाखानीस्थित घरमै थिइन् । अफिसबाट घर फर्किएर आराम गर्नमात्रै बसेकी थिइन्, फोनको घन्टी बज्यो । उठाउँदा कलाकार धुर्मुस (सिताराम कट्टेल) को फोन रहेछ । ‘नमस्कार दिदी म धुर्मुस् । एउटा सिन थियो तपाईंले गरिदिनुपर्‍यो । मिडियाले चाह्यो भने लम्बिन पनि सक्छ ।’ उताबाट फोनमा धुर्मुसले भने । दायाँ बायाँ धेरै नसोची उत्तरमा उनले भनिन्, ‘हुन्छ बाबु, कता आउनुपर्ने हो ?’ धेरै पछि धुर्मुसले बल्ल बल्ल उनको नम्बर पत्ता लगाएका रहेछन् ।
सुटिङको लागि ककनी बोलाएपछि उनी बुढीमान्छेलाई एक्लै जान सकस भयो । धुर्मुसले ल्याउने पु¥याउने मान्छे खटाए । उनी निरन्तर गइरहिन् । एक सिनको लागि भनेर बोलाइएको थियो उनलाई । तर दर्शकले मन पराइदिएपछि उनको दृश्य लम्बियो । लक्ष्मी अर्थात ‘अफ्सरा आमा’ भनेर उनको ‘हाइ हाइ’ शुुरु भयो ।
बाटोमा केटाकेटीले देख्दा झ्याम्मै भुम्मिन आउँथे । ‘फोटो खिचौं न आमा’ भनेर युवा बृद्धा र केटाकेटी उनको नजिक पर्थे । एकतमासले उनलाई सबै देख्दा अचम्म लाग्थ्यो । नसोचेको चर्चा र ख्याती कमाएँ भन्ने भान हुन्थ्यो । आज पनि उनलाई धेरैले उनको वास्तविक नाम लक्ष्मी नभएर ‘अप्सरा आमा’ भनेर चिन्छन् । उनलाई कसैले यही नामले पुकार्दा नै बढी खुशी मिल्छ ।
सानो हुँदा खुब रेडियो सुन्ने बानी । एकदिन रेडियो नेपालमा गएर गीत गाउँछु भन्ने सपना बुन्न थालिन् । १२ वर्षको उमेरमा काठमाडौं आएकी उनले संगीतमा संघर्ष गर्न सकिनन् । एक दुइपटक आफ्नो गीत लिएर रेडियो नेपाल र स्टुडियो पनि नधाएकी होइनन् । गाउँघरमा आमाहरूले गाउने घाँसे गीत लिएर स्टुडियोतिर पुगेकी उनलाई त्यतिबेला कसैले पत्याएनन् ।
‘तेरो घाँसे गीत कसले सुन्छ ? अलि पैसा खर्च गर अर्कै गीतको भिजुअल गर्नुपर्छ’ भनेर भन्थे । तर उनीसँग पैसा थिएन । परिस्थितिबस संगीतमा लाग्ने सपनालाई उनले पूर्णविराम लगाउनुप¥यो । तर दोहोरी साँझमा भने उनी गीत गाउँथिन् । दोहोरी गाएर सुनाउँदा उनले लजाउँदै भनिन्, ‘अहिले त बुढी भइयो । टुक्का जोड्न पनि सकिदैंन । बिर्सिहाल्छु । पहिला कम्ति खेल्थिन म दोहोरी ।’
पछि उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको अतिथि विभागमा जागिर खाइन् । जागिर खाँदा उनको तलब ४०० रुपैयाँ थियो । उनले अवकाश पाएको धेरै समय भएको छैन । तर संगीतबाट कमाउन नसकेको ख्याती कलाकारिताले दिएको छ ।
उमेरले उनी अहिले ६८ वर्ष पुगिन् । कलाकारितामा आउनु भगवानको लिला मान्छिन् उनी । अरूसँग यस्ती थांग्ने बुढी पनि अप्सरा हुन्छु र ? भनेर उनी ठ्टटा गर्छिन् । वरपरका मान्छे गललल्ल हाँस्छन् । १२ वर्षदेखि काठमाडौंमा बसेकी उनी त्यही उमेरमा विवाह भयो । अभिनयले गर्दा अहिले धेरै देश घुमिसकिन् । घुमेकामध्ये हङ्कङ् उनको पहिलो रोजाइमा छ । अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘त्यता धुवाँ धुलो छैन । भाषा नबुुझिएका कारण लाटो भइन्छ तर स्वर्गै हो ।’
विदेश गएर नेपाल आएपछि तिक्तता लाग्छ उनलाई । भन्छिन्, ‘राज्यले जनतालाई हेर्दैन । मौका पर्‍यो भने अहिलेको राज्यले बेच्छन् हामीलाई ।’
अहिले पनि विदेश जाने अवसर आउँछन् । उनलाई जान मन लाग्दैन । तर छोराछोरीले जान उक्साउछन् ।
जिन्दगी आफ्नो गतिमा गइरहेको समयमा उनलाई क्यान्सर भयो । थाहा पाउँदा त सुरुमै उनलाई छोरा छोरीको चिन्ताले सतायो । दुइ छोरा एक छोरीको बिल्लीबाठ हुनेभयो भनेर डराइन् उनी । कति समय त रोएरै बिताइन् । अहिले उनी लगभग ठिक भइसकिन् । बाँचौंला र ? भन्ने आशा भरोसा नै मरिसकेको थियो उनमा । अहिले आफ्नो अवस्था हेर्दा बहादुर रहेछु जस्तो लाग्छ उनलाई ।
नेपाली कलाकारप्रति उनको ठूलो सम्मान छ । गायकमा सुगम पोख्रेल मनपर्छन् उनलाई । उनीवाहेक धेरै गायक मनपर्ने भएपनि नाम सम्झिन गाह्रो भएको उनले बताइन् । कलाकामा धुर्मुस, मुन्द्रे र ,महको कमेडी रुचाउँछिन् उनी । प्रायः कलाकार सबै मनपर्छ । तर यदि कुनै हिरोइनको रूप मनपथ्र्यो भने ती थिइन् निरूता सिंह । निरूताको मुस्कान र आँखामा मोहनी छ जस्तो लाग्छ उनलाई ।
तिज गीत 'नेटो काटमकी यसपाली' सार्वजनिक
जहाजबाट बादल फाटेको देखेपछि धून फुर्यो (भिडियोसहित)
गायक प्रमोद खरेल गाउँपालिकाको सद्भावना दूत नियुक्त
सत्ताले जन्माएका सामन्तीहरु
बस र भ्यान जुद्दा २ जनाको मृत्यु, १८ जना घाइते